မိုးလေ၀သ Archives - Newposts
ပြည်သူ့အချစ်တော်လေး စုစုစံပြောလာတဲ့ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းကြောင့် မိုးကြီးနိုင်သောဒေသများ
June 30, 2022 newposts2021 0
ပည်သူ့အချစ်တော်လေး စုစုစံ ကတော့ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးဖြစ်စေမယ့် မိုးလေ၀သခန့်မှန်းချက်တွေကို ထုတ်ပြန်ပေးလာပါတယ် 30/06/2022 🌧🌧🌧🌧🌧 ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ မုတ်သုန်လေအားနည်းနေပါတယ် နောက်၂၄နာရီအတွင်း မွန်ပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ ရှမ်းပြည်နယ်မှာနေရာစိတ်စိတ် မိုးရွာနိုင်ပြီး ပဲခူးတိုင်းအရှေ့ပိုင်း နေပြည်တော်နှင့်မန္တလေးတိုင်းဒေသတွေမှာ မိုးများစွာရွာသွန်းနိုင်ကာ စစ်ကိုင်းတိုင်းကြီးမှာမိုးကြီးနိုင်ပါတယ် ဒေသအလိုက် မြို့ရွာအလိုက်ခန့်မှန်းချက်တွေကို ခန့်မှန်းပေးနိုင်ရန် အသေးစိတ်စိစစ်တွက်ချက်နေပါတယ် […]
ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့မှ နောက် ၂၄နာရီအတွင်း အပူလျော့မိုးတွေ ရွာသွန်းနိုင်တဲ့ ဒေသများကို ခန့်မှန်းပေးလိုက်တဲ့ မိုးနတ်သမီးလေး စုစုစံ
မုံရွာခရိုင်ခန့်မှန်းပေးထားတဲ့အတိုင်း မိုးရွာပါတော့မယ် 28/06/2022 AT 4:57PM နောက် ၂၄နာရီအတွင်း ပြင်ဦးလွင် နောင်ချို ဂုတ်ထိပ် ကျောက်မဲ သီပေါ လားရှိုး သိန်းနီ၊ ကွတ်ခိုင် မူဆယ် နမ့်ခမ်း နမ္မတူ မိုးမိတ် မိုးကုတ်မြို့များမိုးများစွာရွာလာနိုင်ပါတယ် ISSUED TIME 28/06/2022 ထီးလင်ဖက်ကမိုးတွေက မကွေးတိုင်း […]
June 26, 2022 newposts2021 0
၂၀၂၂ ဇူလိုင်လ ၁ရက်နေ့မှ ၃ရက်နေ့အတွင်း ပျော်ဘွယ် မိတ္ထီလာ သာစည် လှိုင်တက် ထူးတွင်း ဘုရားငါးဆူ ပျဉ်ညောင် ခွေးရုပ် ယင်းမာပင် ဝက်ဖြူရေ ရေယား ရေယောင်းမ ကလော အောင်ပန်း ဟဲဟိုး ညောင်ရွှေ အင်းလေး ဆီဆိုင် ဟိုပုန်း တောင်ကြီး ရွှေညောင် […]
ယနေ့မှ စပြီး ဇူလိုင်လ ၁ရက်နေ့ထိ ရက်ဝေးခန့်မှန်းချက် ပေးလိုက်တဲ့ မိုးမင်းသမီးလေး စုစုစံ
ဇွန်လ ၂၄ရက်ယနေ့ မှာ ဧရာဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်း ၊ပဲခူးတိုင်းအရှေ့ပိုင်း ၊နေပြည်တော် ၊ရှမ်းပြည်နယ် ရခိုင်ပြည်နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ဒေသတွေမှာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီး မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ်ဒေသတွေမှာ မိုးအနည်းငယ်မှအသင့်အတင့်အထိမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ ဒိုက်ဦး ပြွန်တန်ဆာ ညောင်လေးပင် ကျောက်တံခါး ပဲနွယ်ကုန်း ကညွှတ်ကွင်းဖြူး တောင်ငူ ဒေသများမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့် မိုးဆက်တိုက်ကောင်းနိုင်သဖြင့်တနိုင်း ကံဆီးလုံးခင်းဖားကန့် မြေပြိုနိုင်သောနေရာနေထိုင်သူများအထူးသတိထားကြစေလိုပါတယ်။ ၂၀၂၂ […]
မိုးလေဝသပညာရှင် ဆရာမလေးမစုစုစံရဲ့ ယခုတစ်ပတ်အတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များ…(လေမိုးကြီးနိုင်တဲ့ တိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့ ပြည်နယ်တွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်) ၂၄နာရီအတွင်း 🌧🌧🌧 ဘင်္ဂလားဒေချ့်နိုင်ငံ စစ်တကောင်းပြည်နယ် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ချင်းပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးခရိုင်ဒေသတွေမှာမိုးရွာနိုင်ပါတယ် ၂၄နာရီအတွင်း လိုင်ဇာ မိုးကြီးရေလျှံ နိုင်ပြီး တာပိန်မြစ်ရေ အရှိန်အဟုန်ဖြင့်စီးဆင်းလာနိုင်ပါတယ် ဆွာ […]
၂၀၂၂ ဇွန်လ ၂၁ရက်နေ့မှ ၂၄ရက်နေ့အတွင်း ထူးကဲမိုးတွေရွာမယ့်ဒေသမျာ:….
၂၀၂၂ ဇွန်လ ၂၁ရက်နေ့မှ ၂၄ရက်နေ့အတွင်း ထူးကဲမိုးတွေရွာမယ့်ဒေသမျာ:…. ဧရာဝတီမြစ်ရေကြီးနိုင် ၂၀၂၂ ဇွန်လ ၂၁ရက်နေ့မှ ၂၄ရက်နေ့အတွင်း ကချင်ပြည်နယ်တွင်မိုးများစွာရွာသွန်းနိုင်ပြီး မေခ မလိခ မြစ်ဖျားပိုင်း ပူတာအိုခရိုင် ဖုန်ကန်ရာဇီ ဂန်လန်ရာဇီ တောင်တန်းများပေါ်တွင် ထူးကဲမိုးတွေရွာနိုင်သဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်အထက်ပိုင်းတွင် စိုးရိမ်ရိမ်မှတ်တွေကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ကြစေရန် ရက်ဝေးကြိုတင်ခန့်မှန်းပေးပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ် ပဲခူးတိုင်းအရှေ့ပိုင်း လေမိုးလျှပ်စီးမိုးကြိုး […]
ဇွန်လ တတိယပတ်(၁၀)ရက်အတွက် မိုးလေဝသ နှင့် မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်များ
ဇွန်လ တတိယပတ်(၁၀)ရက်အတွက် မိုးလေဝသ နှင့် မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်များ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ တတိယ(၁၀)ရက်ပတ်အတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များနှင့် မြစ်ရေအခြေနေခန့်မှန်းချက်များကို (၂၁.၆.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင်မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒဦးစီးဌာနမှ အောက်ပါအတိုင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင်လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း (၁)ကြိမ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ အနောက်တောင်မုတ်သုံလေသည် ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့တွင် အားအနည်းအငယ်မှအားအသင့်အတင့် ရှိနိုင်ပြီး၊ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင်အားအသင့်အတင့် ရှိနိုင်ပါသည်။ မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေမှာနေပြည်တော်၊ […]
မိုးလေဝသပညာရှင် မစုစုစံရဲ့ ယနေ့ည မိုးခန့်မှန်းချက်🌧🌧🌧
၂၄နာရီအတွင်း 🌧🌧🌧 ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ့နိုင်ငံ စစ်တကောင်းပြည်နယ် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ချင်းပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးခရိုင်ဒေသတွေမှာမိုးရွာနိုင်ပါတယ် ၂၄နာရီအတွင်း လိုင်ဇာ မိုးကြီးရေလျှံ နိုင်ပြီး တာပိန်မြစ်ရေ အရှိန်အဟုန်ဖြင့်စီးဆင်းလာနိုင်ပါတယ် ဆွာ နန်ချွန် ကေတုမတီ ရေတာရှည် လေမိုးလျှပ်စီးမိုးကြိုး မိုး 🌧🌧🌧 20/06/2022 […]
၂၀၂၂ ဇွန်လ ၁၈ရက်မှ ၂၅ရက်နေ့အတွင်း မိုးကြီးနိုင်တဲ့ဒေသများ…
၂၀၂၂ ဇွန်လ ၂၄ရက် ၂၅ရက်နေ့တွေမှာ ရှမ်းပြည်နယ် မန္တလေးတိုင်းနေပြည်တော် မကွေးတိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းတွေမှာ မိုးရွာနိုင်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးကြီးနိုင်ပါတယ် ဒေသအလိုက် မြို့ရွာအလိုက်တိကျတဲ့ခန့်မှန်းချက်များခန့်မှန်းပေးနိုင်ရန် weather data တစ်ချို့ဝယ်ယူရန်ကျန်ရှိနေပါသေးတယ် ဝယ်ယူပြီးတာနဲ့ စိစစ်တွက်ချက်ပြီး အချိန်နှင့်တပြေးညီခန့်မှန်းပေးသွားပါမယ် ISSUED TIME 18/06/2022/at 10:22AM 18/06/2022 🌧🌧🌧 […]